Horudhac: France vs Germany… (Kulanka ugu weyn wajiga koowaad ee wareegga Guruubyada oo caawa xiddigo waaweyn kulminaya) – Gool FM
(Munich) 15 Juun 2021. Magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa caawa marti gelineysa kulanka ugu miisaanka culus wareegga ciyaaraha koowaad ee wareegga guruubyada tartanka Euro 2020, waxaana caawa foodda is daraya xulalka France iyo Germany.
Labadan xul ayaa ku kala guuleystay labadii Koob Adduun ee lasoo dhaafay iyadoo Jarmalka horyaalnimada adduunka loo caleemo saaray 2014, halka Faransiiskana uu gacata ku dhigay Koobka Adduunka sanadkii 2018.
Karim Benzema iyo Antoine Griezmann ayaa labaduba taam u ah ciyaarta caawa kaddib dhaawacyo yaryar oo labadan weeraryahan kasoo gaaray kulankii baashaalka ahaa ee uu xulka France la ciyaaray Bulgaria Talaadadii lasoo dhaafay, markaas oo Les Bleus 2-1 ku gaareen.
Dhinaca kale, xulka Germany ayaanan heli doonin laacibka khadka dhexe kaga ciyaara ee Leon Goretzka kaasoo haatan kasoo kabanaya dhaawac lugta ah, balse waxaa kulankan diyaar u ah Ilkay Gundogan iyo Toni Kroos kuwaasoo khadka dhexe maamulayay ciyaartii ay Jarmalku 7-1 ku xaaqeen xulka Latvia 7-dii bishan.
Kulankan ayaa noqon doona midkii lixaad oo ay Jarmalka iyo Faransiiska ku kulmaan tartan weyn, balse waxa uu dhinaca kale noqon doonaa midkii ugu horreeyay ee ay wareegga Guruubka isku arkaan.
Rikoorka is aragyadii hore ee labadan xul ayaa si buuxda isula simman maadaama min labo guul iyo hal barbarro ay kala heleen shantii ciyaarood ee hore ee tartammada waaweyn isku arkeen.
Marka kaliya ee ay hore labada waddan ugu kulmeen tartanka qarammada qaaradda Yurub waxa uu ahaa Euro 2016 wareeggiisa nus-dhammaadka, waxaana ciyaarta ay ku dhammaatay 2-0 oo ay Faransiisku ku adkaadeen iyadoo labada gool uu wada dhaliyay Anoine Griezmann.
Faransiiska ayaa guuldarro la’aan ah shantii ciyaarood ee lasoo dhaafay oo xulka Germany kula soo ciyaaray carrada Jarmalka waxaana uu heystaa saddex guul iyo labo barbarro.
Ciyaarta kaliya ee uu hore Faransiiska ugu soo ciyaaray magaalada Munich waxa uu bareejo goolal la’aan ah lasoo galay Jarmalka ciyaar dhacday bishii September ee sanadkii 2018.
Faransiiska ayaa ka qayb galaya tartanka qarammada qaaradda Yurub markii tobanaad, waxayna sidoo kale u tahay markii siddeedaad oo xiriir ah, markii ugu dambeysay ee uu seegayna waxay ahayd sanadkii 1988.
Geesta kale Faransiiska waxaa koobkan kaga guuleysasho badan kaliya xulalka Germany iyo Spain oo min saddex jeer qaaday, waxaana diiwaanka France ku jira labo Euro oo kala ahaa 1984 iyo 2000.
Tan iyo bilawgii Koobka Adduunka ee sanadkii 2014, xulka France ayaa guuleystay 14 ka mid ah 19 kulan oo uu ciyaaray tartan weyn.
Guuldarrada kaliya ee xulka Faransiiska soo gaartay ciyaartiisa ugu horreysa tartanka qarammada qaaradda Yurub waxa ay soo gaartay dhacdadii ugu horreysay tartankan oo ahayd 1960, xilligaasna Faransiiska waxaa 4-5 ku garaacay xulka Yugoslavia, haatanna waa guuldarro la’aan ciyaartooda ugu horreysa Euro tan iyo markaas, shan guul iyo saddex barbarro ayayna heystaan Faransiiska.
Haddii uu Macallin Didier Deschamps uu qaado Euro 2020 waxa uu noqon doonaa shaqsigii ugu horreeyay ee Koobka Adduunk iyo Euro ku guuleysta isagoo ciyaaryahan ah iyo isagoo macallin ah, dhinaca kale, macallinkan oo xuka France qabtay July 2012 ayaa ah macallinka labaad ee ugu muddada dheer macallimiinta 24-ka xul ee Euro 2020 ka qayb galaya, waxaana uu caawa wajahayaa macallinka ugu xilliga dheer Euro sanadkan oo ah Joachim Löw kaasoo Jarmalka hoggaaminaya tan iyo July 2006.
Xulka qaranka Germany ayaa ka qayb qaadanaya tartanka qarammada qaaradda Yurub markii 13-aad, waana xulka ugu badan, sidoo kale waa dalka ugu guuleysiga badan tartankan oo waxa uu heystaa saddex jeer inkastoo ay simman yihiin xulka Spain, ciyaarta caawa ayaana noqoneysa tii 50-aad ee tartanka qarammada qaaradda Yurub isagoo noqon doona xulkii ugu horreeyay ee kulammadaas ka ciyaara Euro.
Jarmalka ayaanan abid guuldarro la kulmin ciyaartiisa ugu horreysa ee Euro, waxaana uu heystaa toddobo guul iyo shan barbarro, markii ugu dambeysay ee kulanka furitaanka guul loo diiday waxay ahayd Euro 2004 xiligaas oo ay barbarro 1-1 ah la galeen.
Antoine Griezmann ayaa Jarmalka ka dhaliyay afar gool, waana xulka uu ka dhaliyay goolasha ugu badan inta uu xiran yahay maaliyadda France, sidoo kale laacibkan ayaa si toos ah ugu lug yeeshay 14 gool labadii tartan ee waaweynaa ee lasoo dhaafay kuwaasoo kala ah Euro 2016 iyo Koobka Adduunka 2018, waxaana uu ka badan yahay ciyaaryahan walba oo kasoo jeeda Yurub kaddib 10 gool oo uu dhaliyay iyo afar caawin oo uu sameeyay labadaas tartan.
Kaliya labo goolhaye oo Yurub u dhashay ayaa Manuel Neuer kaga badan safashada tartammada waaweyn ee Koobka Adduunka iyo Euro, waxaana uu jarmalka u saftay 27 ciyaarood, waxaa ka badan kaliya Iker Casillas oo xulka Spain u saftay 31 kulan oo tartammada waaweyn ah iyo Gianluigi Buffon oo xulka Taliyaaniga tiradaas oo kale u ciyaaray.
Ciyaarta caawa ayaa noqoneysa tii 18-aad ee Joachim Low uu hoggaamiyo xulka Jarmalka tartan weyn, waana rikoor isaga u gaar ah, dhinaca kale, waxaa uu Low xulka Germany gaarsiiyay wareegga nus-dhammaadka shan ka mid ah lixdii tartan ee uu hore uu hore u hoggaamiyay, marka kaliya ee uu ku guuldarreystay inuu wareeggaas gaaro waxay ahayd Koobkii Adduunka ee 2018 markaas oo uu Jarmalku ku haray wareegga Guruubyada.
Cristiano Ronaldo oo miiska shirka jaraa'id ka fogeeyay cabitaanka Coca Cola...(Miyey UEFA ka jawaabi doontaa?)